Kuchengetedza, Kuchengetedza uye Kuvanzika kweBhengi Offshore & Zvekutarisira
Offshore Banking Kuchengetedzwa nekuchengeteka
Offshore banking zvinonzwika sepfungwa yakangochengeterwa vapfumi chete. Chokwadi ndechekuti chakachengeteka uye chiri nyore kupfuura munhu wepakati anotenda kuti ndizvo. Saka chii icho pamusoro pekunze mabhenji kunokwevera vanhu mazviri? Zvakanaka, iwe paunotsvaga mhinduro uchaona kuti haina kuomarara sezvaungafunga. Offshore bank account anopa akawanda mabhenefiti pane epamabhangi epamba. Mabhangi mazhinji ekumahombekombe anopa kuchengetedza kwakanyanya, kuwedzera kuvanzika uye rusununguko ruzhinji rwemari uye kushandurika pane kuita mabhangi epamba. Ichi chishandiso chishandiso chinokupa mamwe matipi, mazano uye ruzivo pamusoro pemukana uyu.
Chii chinonzi Offshore Banking?
Offshore banking zvakangofanana nekurira kwayo. Iri kubhengi munzvimbo inochengetera dzimba inowanikwa kunze kwenyika yekugara kweye depositor. Banksshore yekumahombekombe haisi kungogumira kumarudzi madiki akadai seBelize, maCaymans, neCyprus. Izvo zvinosanganisirawo nyika dzakaita seChina neEuropean marudzi, kusanganisira Switzerland, Netherlands, uye Belgium pakati pevamwe. Nyika imwe neimwe ine zviga zvadzo zvinodzora mashandiro avo mabhangi. Asi pakupedzisira vanowanzoita zvinhu zvakafanana chaizvo. Izvi zvinosanganisira inodzora nharaunda inobatsira kuchengetedza kuchengetedza uye kuchengeteka kwebhangi. Uyezve, ivo vanoshandisa anofanirwa-kushingairira system kubatsira kuti vabude kunze kwakaipa vakomana.
Nei Bank Offshore?
Saka kubhengi kunze kwenyika yako yepamba kunokupa chero mabhenefiti here?
Mhinduro kumubvunzo uyu hongu, kune zvakawanda zvakanaka zvekuvhura account yekubhanga rekunze. Imwe yemabhenefiti akakosha uye akakosheswa emabhangi ekunze ndeyekuvanzika. MuUnited States, semuenzaniso, kune mitemo yakaita seUS Bank Securitycy Act ye1970. Gare gare kwakauya USA PATRIOT Act. Ivo vanoita kuti kuzivikanwa kwevose varidzi vemubhengi account account varatidze nyore kuwana. Izvo zvinoita kuti kuve nekuvanzika kwemabhangi mumabhangi emunharaunda kungangove kusipo.
Offshore mabhengi emitemo munyika dzakawanda, zvakasiyana, tora zvakavanzika yeavo vanobata account muhukuru. Nekudaro, mabhangi ekunze munzvimbo zhinji anotongwa haasungirwi kuendesa zvitupa kumunhu wechitatu. Pane zvimwe zvinosarudzika, hongu, senge nyaya dzakakura dzekuparwa kwemhosva senge ugandanga, kutengesa, kana kubiridzira mari. Iyi nhanho yekuvanzika mumabhangi ekunze haingori chete indasitiri chiyero. Asi pane mutemo mune dzakawanda dzenyika idzo dzinorayira kuvanzika uye kuvanzika kwevanobata account. Izvi zvakanakira vanhu vane zvinhu zvavanoshuvira kuchengetedza kubva kune veruzhinji kudzvanywa.
Offshore Banking yekudzivirira Mutemo
Sekureva kweAmerican Bar Association mu2006 iyo United States yaive kumusha kune magweta anopfuura miriyoni. Uyezve, masutu evagari yakawedzera 12% kubva ku1993-2002. Nhasi, United States ine ruzhinji rwe magweta epasi rose. Kunyanya, 80% yemagweta epasi rose anoita muUS. Iyo ine zvakare yakawanda yematare ayo. Saizvozvo iyo US inobata 96% yemhosva dzenyika. Vakawanda vavo vane mafungiro mune zvisikwa. Izvi zvinofanira kuita kuti kuchengetedza zvinhu zvako kuve chinhu chinokosha.
Sekuziva kunoita vanhu vazhinji, kumhan'ara mhosva isina basa, kunyangwe iri nhema, inogona kukuvadza zvakanyanya hutano hwemunhu hwemunhu. Iyi ndiyo kesi kana iyo mhosva yakabudirira kana kwete. Iyo inobhadharwa pamutemo munhu yaanoda kudzivirira mhosva inogona kunge yakakosha. Nekuda kweizvozvo, kazhinji zvakachipa kukanda chigadziriso chemari kune wetaurisa kuti mhosva isvike. Kana ukaisa zvinhu zvako mubhangi rekune dzimwe nyika unenge uchizvidzivirira kubva kumagweta ane hutsinye nematare edzimhosva. Izvi zvinodaro nekuti hazvisi zvako chete zviwanikwa zviri mune imwe nzvimbo mutongi pane iyo yaunogara mairi. Asi yakasimba kwazvo mitemo yekuvanzika inotonga mabhangi.
Kuchengetedza Izvo Zvako
Chikamu chekudzivirirwa kwezvinhu uye kuvanzika zvinopihwa nemakadhi emabhangi ari kumhiri kwakanyanya. Ichi chiitiko chikuru kune varidzi vemabhizinesi avo vanoda kuchengetedza izvo zvinhu zvavanenge vawana. Iko kunosanganiswa kwekunze kubhengi kuchengetedza zvakavanzika uye kubata zvinhu pasi pemutemo wepamutemo izvo zvakaoma kusvika. Izvi zvipinganidzo zviviri zvaizodzikisira magweta mazhinji aidzingirira mhosva pamuri. Izvi zvinokonzeresa nekuda kwekunetseka kwakanyanya kuwana "dzimba dzekubhadhara."
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kuchengetedza kwemidziyo hakuwanikwe chete neakaundi rekunze kubhengi. Icho chikonzero ichi. Kana iwe ukabata account yako pachako, mutongi anogona kukurayira kuti udzore mari kubva kuaccount account yako. Kana mukomana akapfeka jira dema akabata gavel akapa rairo, anogona kukumanikidza kudaro.
Kudzivirirwa kubva kumatare edzimhosva kwakakosha here kwauri? Kana zvirizvo, kubata inobata account kune imwe nhumbi kuchengetedzwa kwemavara trustee ine rezinesi yekutengesa kwakakosha. Ndokunge, bata mari mukati mekuvimba kwako, wakachengetedzwa neinesi rezinesi, inishuwarenzi, inorumbidzwa. Izvi zvinodaro nekuti paunoita kudaro unoshandura matafura. Matirasti anogara kumahombekombe. Naizvozvo, mutongi wemunharaunda haana simba rekumanikidza mutongi wekunze kuti vateedzere.
Kune zvakanakira kuwedzera kwekuvanzika. Offshore bank account anopawo huwandu hukuru hwerusununguko kupfuura maakaundi emabhangi epamba anoita. Maakaunti emumba anogona kukurambidza kuita mamwe mabasa ekupfuma. Asi mabhangi mazhinji emakungwa anogona kuvhura mikana iyi inowana mari uye inobatsira. Pane chimwe chikonzero chikuru iyi mikana yekudyara inowanikwa kumabhangi ekunze nevatengi vavo. Tinodaro nekuti kune zvishoma kupindira kwehurumende kupindira mune zvemabhanga mumatunhu akati wandei.
Kuburikidza nechero bank account iri unogona kunakidzwa nezvakanaka zvekushandisa mari dzenyika. Iwe unogona kuzviita mumari dzakasiyana. Uyezve iwe unogona kugashira zvirinani kuchinjanisa mareti emari iyoyo. Kunyorera bank account yekubhuroka kunovhura mikana yebhizinesi isingawanikwe mune mamwe masimba. Nekudaro, bhangi rekune dzimwe nyika rinobvumira nyore mari yekudyara mumisika iri kubuda uye nyika dzichiri kusimukira. Izvi zvaiwanzobvumidza vanoisa mari kuti vagamuchire kudzoka kwavo kwakanaka pane izvo zvavanogona kugamuchira mukati. Kune mamwe matsimba ekudyara uye emabhizinesi emamwe maakaundi emhiri kubanki account Izvi zvinogona kusanganisira kubata stock stockfolio uye / kana simbi dzinokosha. Uye zvakare, kazhinji kazhinji ikoko vanopa mamwe mativi emari yemari inofadza yavanopa kune avo vane account.
Chii chakachengeteka? Bhanhire reUS kana kuti mabhangi eAustralia?
Imwe bhenefiti inovapo nekuve neanternational bank account ndeyekuti munzvimbo zhinji mabhangi akagadzikana kwazvo. Ikozvino ndoziva zvaunogona kunge uchifunga izvozvi: "Izvo zvinogoneka sei?" Chokwadi chiri pachena chenyaya ndechekuti pakati pe2008 ne2012, pakanga paine mabhangi e465 eUS akakundikana. Zvakare, iyo ichangoburwa yegore rose mukati-yakadzika kuongororwa neGlobal Finance yakawana izvi. Wepa yepamusoro 50 yenyika mabhangi akachengeteka vatatu chete (3) mabhangi eU.S ndiwo akaita rondedzero. Pakanga pasina kana bhangi rimwe chete reU.S. mu mabhangi akachengetedzeka e30. Kwete imwe. Maererano nerondedzero iyi, mabhangi epamusoro-soro e10 akachengeteka munyika aive ese muEurope.
Ikozvino hazvireve kuti indasitiri yebhangi reUS iri padanho rekuisa. Ndokunge, kuderera kwehupfumi hakusati kuri kwakaringana mukona. Huwandu uhu hunongoratidza kuti kune nyika dziri kumahombekombe dzinopa kugadzikana kwakawanda kumabhangi kupfuura zvinoita US. Izvi zvinowanzoitika kuburikidza nemabhangi mirawo inoda yakasimba masheji mashamba. Uyezve mazhinji emasangano aya anopa zvirinani kudzoka kune varidzi ve account uye nekupa kwakawanda kuwanda kwekudyara. Iyi nhanho yekugadzikana inobvumira varidzi veakaundi kuti vatsaukanise zvinhu zvavo. Izvo zvinovapa mukana wekuti vadzivirire zviri nani izvo zvinhu uye chengetedza zvakavanzika zvemari.
Chekupedzisira, vanhu vazhinji vane zano rekuti kuwana banki yekumahombekombe iri rakareba, rinonetsa uye rakaomarara. Vanofunga kuti zvakangochengeterwa vashoma chete; kune avo vanogona kubhadhara mari yakakwira, uye vanobhadharisa mari yekubhadhara mabhuku. Izvi zvinogona kunge zviri zvechokwadi makumi emakore apfuura apo kuisa maakaundi emhiri kubhengi kwakaoma zvinotyisa. Uyezve, ivo vaidhura nekuda kwekuda kwekuenda kubhangi. Asi zvakazouya kuberekwa kwezera remadhijitari uye kushandiswa kwemakomputa kwakabatana neinternet. Saka, nhasi, kuwana nekutarisa kwemahombekombe kubhengi maakaundi zviri nyore sekuita mashoma emabhangi epamba emabhangi.
Muzuva rino uye zera rakangoita chero munhu mukuru anganyorere kuaccount yekubhengi account. Iyo inyaya yakapusa yekubata shuwa anokodzera senge sangano redu. Iyo internet yakabvisa kusasarudzika kwemahombekombe ebhengi emhiri. Izvo zvakagadzira iyo nzvimbo iyo chero munhu anogona kukumbira. Zvingangoita chero munhu anogona kuchengetedza account pasina kubhadhara zvakakura zviri pamutemo nekugadzirisa muripo kune magweta. Uyezve hapana chinodikanwa chekufamba uchienda kune imwe nzvimbo yekune rimwe bhanga mune mamwe matunhu. Mabasa anopihwa nemabhangi ekunze anosvika ikozvino kuwanikwa kune wese munhu. Naizvozvo, zviri nyore kwazvo kunyorera akaundi yekumhiri kwemhiri kubhengi uye mukohwe zvakanakira kupfuura zvingafungirwe nemunhu.
Offshore Banking: Zviri kwauri?
Offshore bank account akave akakomberedzwa nezvakawanda mystique mumakumi emakore apfuura. Wepakati munhu anotenda kuti mabhangi anochengetera izvi zvakanaka kune vakagwinya vega. Saka nekudaro, ivo vanoona kuti izvo zvese zvakanaka zvinobatsira ndezvemumwe mukomana chete. Iyo ndiyo imwe dzidziso yekuti isu tinofara kutaura hazvisi zvechokwadi. Pane zvakanaka kwauri, zvakare.
Zvakanakira zvekuvanzika, kuchengetedza kwemidziyo, kusimba pamasangano, uye kushandurika mumabhangi ekunze anowanikwa kune wese. Iwe uri muridzi webhizinesi ari kutsvaga kuchengetedza zvinhu zvake zvebhizimusi? Iwe uri mumwe munhu anoda kupinda mikana yekudyara mikana mumisika yekune dzimwe nyika? Kana zvirizvo, nyanzvi dzakawanda dzekudzivirirwa kwefuma dzinopa zano rekutarisa kuti uwane account yekubhangi rekune dzimwe nyika.
Kubhengi kuvanzika uye kuchengetedzeka kunetseka kukuru. Chinhu chakakosha kuti iwe nemari yako muchengeteke. OffshoreCompany.com inogara ichikurudzira mabhengi masangano anotora chikamu chepakati chebhangi. Iyo system inonyanya kurongeka. Inoshandisa zviito zvemitemo yakaoma, izvo zvinopa hwaro hwakasimba uye hwekutarisira kwakazvimirira kwemabhangi emhiri nemakungwa.
Masangano mazhinji anopa maakaundi akachengetedzeka uye akasarudzika emabhangi emakambani eAmerica nevekunze nemakuru ehurumende. Iyo masosi inopa basa nekutsigira hupfumi hwenyika. Ndokunge, hupfumi hwavo hunoenderana nebazi rezvemabasa. Nekuda kweizvozvo, zvakavanzika uye mitemo yezvekuchengetedza mari ndeyekureba uye yakagadzikana. Izvo zvakakosha kuti vese vangangove vatengi vaite sarudzo chaiyo yekutonga. Isu tinoita tsvakiridzo yakawandisa kune vazhinji vekumusoro kwemahombekombe ebhengi accounters. Uyezve, isu tinofara kukupa iwe ruzivo runobatsira kuti tikubatsire mukuita sarudzo yakakodzera.
Offshore mabhangi mune dzimwe nyika kutora chikamu mune yakatemerwa kuchengetedzwa kwemishuwarenzi kuchengetedza masystem. Vanotora kuchengetedzeka nekuvanzika zvakanyanya. Vanyoreri vanosimbisa kwazvo kuchengetedzeka kubhengi kuchengetedzwa. Ivo vanosimbisa kwazvo zviga. Ndokunge, iwo mutemo unodzika izvo mabhenji eruzivo anogovera nevechitatu mapato, kusanganisira hurumende dzekunze. Nomuzvarirwo, mitemo inobvumidza vanoshanda kubhangi rebhangi kuti vapewo ruzivo mune zviitiko zvetsotsi zvakaipisisa kana ugandanga. Ivo havatore kuvanzika kwebhangi zvishoma.
MuSwitzerland, semuenzaniso, mutemo unoranga zvakanyanya chero mushandi anotyora zvakavanzika zvevatengi. Izvi zvinosanganisira mhedzisiro yakaoma uye nguva yejeri. Saka, ivo vanotora depositor kuvanzika zvakanyanya. Zvakakoshawo kuti bhangi rekune dzimwe nyika rirege kuva nebazi repamba. Izvi zvinodaro nekuti bazi remumba rinogona kupihwa faindi kudzamara bazi rekunze rirasa mari yacho. Ndeapi mabhangi ane musanganiswa wakanyanya wekuchengetedza, kuchengetedza, kuwana online uye inogamuchira pachena vatengi vekunze? Ipapo ndipo panopinda kambani senge ino. Shandisa iyo nhamba kana fomu papeji ino kuti ubatsirwe.
Heano mamwe mahofisi ayo ari oga mabhizimusi emari:
Channel Islands (Jersey neGuernsey)
VokuTurkey zveTurks Islands
OffshoreCompany.com akagadzira hukama hwakamira kwenguva refu nemabhangi ekunze. Isu tinoita ongororo dzese, nekuda kwekushingairira uye mum-munhu musangano. Kuita izvi kunobatsira kuve nechokwadi chekuti mabhiri emahombekombe emaakaunzi atinobatsira vatengi kutanga anogona kunge akachengeteka. Svitsa kwatiri kune rumwe ruzivo kana kuvhura account mubhanga rakachengetedzeka remhiri.
To chitsauko 6>